လူတိုင်းမှာ စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ ဒိုင်ယာရီနဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ရေးမှတ်ထားတဲ့ ဒိုင်ယာရီတွေရှိလိမ့်မယ်။ ကျနော့်အတွက် ဒီစာမျက်နှာလေးက ကျနော့်ဘ၀ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ ရောက်မလာမယ့် အကြောင်းအရာတွေ၊ အမှတ်တရတွေလည်း ကျနော့်ဘ၀မှာအများကြီးရှိကောင်း ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ဘ၀မှာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲ ကျနော်လည်း လူထဲကလူတစ်ယောက်နည်းတူ ထင်မှတ်မထားတဲ့ ကိစ္စတွေအများကြီး ကြုံခဲ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့။ ချစ်ခဲ့တယ်၊ လွမ်းခဲ့တယ်၊ ဝေးခဲ့တယ်၊ ငိုခဲ့တယ်။ ဒါတွေက လွယ်လွယ်မေ့ဖို့ မလွယ်ပေမဲ့ အခုတော့ ကျနော့်မှာ ဒီဒဏ်ရာတွေ သက်သာစပြုလာပြီလေ။ အရင်ကဆို ဒီစာမျက်နှာလေးကို လာဖို့သတ္တိမရှိခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်အနာကိုယ် ပြန်စမ်းဖို့ သတ္တိမရှိတာလည်း ပါတာပေါ့လေ။ ကျနော်က သူရဲဘောကြောင်သူ သက်သက်ပဲ။
အရင်ကဆို သီချင်းသံကြားရင်တောင် မျက်ရည်ဝဲတတ်တဲ့ ကျနော်က အခုဆို အားလုံးကိုမေ့ပစ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ သီချင်းသံတွေ ဝေးတဲ့နေရာကို ပြေးထွက်သွားစရာမလိုတော့ဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို အချိန်ရယ်၊ နာကျင်ရတဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုရယ်တော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာပေါ့လေ။
ဒီနေ့တော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ခြေချဖို့ မရဲတဲ့ ဒီစာမျက်နှာလေးမှာ ကိုယ့်ဒဏ်ရာကို ပြန်လာရှာတယ်လေ။ မနာကျင်တော့တာကလွဲလို့ အမာရွတ်ကတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့မှာပေါ့လေ။
အချိန်တွေ တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲသွားတယ်။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ နေမင်းကြီးက တာဝန်ကျေသလို၊ ညရောက်တိုင်းလည်း လမင်းကြီးက သူ့တာဝန်သူကျေခဲ့တယ်။ လမင်းကြီးမရှိတဲ့တချို့ညတွေမှာ တခဏတာ မှောင်မှိတ်နေပေမဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုမှာတော့ လမင်းကြီးက အေးမြတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ ပြန်ပေါ်လာတယ်လေ။
Posted by ယုန်ကလေး at 11:01 AM0comments
ညီမလေးရေ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ လူတိုင်းလူတိုင်း လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းလေးတွေနဲ့ ပြီးတော့ အင်တာနက်လေးကြည့်ရင်း အရင်က သူငယ်ချင်းတွေ ၀ိုင်းဖွဲ့စကားပြောကြတဲ့ နေရာမှာ ခုတော့ ကိုယ့်ဖုန်း ကိုယ်ပွတ်လို့ ဖာသိဖာသာပဲ တွေ့ဆုံမှုလေး ပြီးဆုံးခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ အဲ့ဒါက နည်းပညာတိုးတက်မှုရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလို့ ဆိုလေမလား၊ လူသားဆန်ဆန်နွေးထွေးမှုထက် နည်းပညာတွေပေါ်မှာ ခုံမင်သာယာမှုတွေလားတော့ မသိတော့ပါဘူး ညီမလေးရယ်။
မိသားစုတွေ့ဆုံပွဲတွေ၊ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်း တွေ့ဆုံပွဲတွေ၊ ချစ်သူခင်သူတွေ ဆုံတွေ့ကြတဲ့နေရာတွေမှာ အရင်လို မနွေးထွေးတော့ဘူး ညီမလေး။ သူ့အကြောင်း၊ ကိုယ့်အကြောင်း၊ သာကြောင်း၊ မာကြောင်း သတင်းမေးဖို့ထက် သူ့ထက်ငါ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ Check In ၀င်ဖို့သာ စိတ်စောနေကြတာ မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီက ရလာတဲ့ လိုက်ခ်တွေ ကွန်မန့်တွေအပေါ်မှာ သာယာစီးမျောပြီး ဖုန်းလက်ကမချ၊ အချင်းချင်း စကားပြောဖို့တောင် မေ့နေကြရဲ့လေ။
တချို့တွေအတွက် Facebook က သတင်းအချက်အလက်တွေ ဝေမျှစရာနေရာ၊ တချို့တွေအတွက် အမုန်းတရားများ မီးမွှေးရာ၊ တချို့တွေအတွက် ဟစ်တိုင်၊ တချို့တွေအတွက် ၀ါဒဖြန့်ရုံသက်သက်၊ တချို့တွေအတွက် မြားနတ်မောင်၊ တချို့တွေအတွက် စိတ်ချင်းတဖြည်းဖြည်းဝေးကွာရာ နေရာ၊ တချို့တွေအတွက် ကြွားလုံးထုတ်တဲ့ နေရာ၊ တချို့တွေအတွက် ၀မ်းနည်းခြင်းများ ငိုကြွေးရာနေရာ၊ တချို့တွေအတွက် ငွေရှာတဲ့ နေရာ၊ တချို့တွေအတွက် စိတ်ကြီးဝင်တဲ့နေရာ၊တချို့တွေအတွက် အခွင့်အလမ်းရှာဖွေရာနေရာ၊ တချို့တွေအတွက် စီးပွားရှာဖွေရာနေရာ၊ တချို့တွေအတွက် မိမိကိုယ်ကိုယ်ရောင်းချရာ နေရာ၊ တချို့တွေအတွက် အလာပသလာပပဲခေါ်ခေါ်၊ အီစီကလီ ပလီပလာပဲခေါ်ခေါ် ပြောတဲ့နေရာ၊ နောက်ထပ် တချို့တွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ် ညီမလေးရေ။ ဆက်ပြောနေရင် မဆုံးတော့တဲ့ စာတစ်စောင်ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ။
ဒီတော့ မြန်မာပြည်မှာအသုံးများတဲ့ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ FB က လူတစ်ယောက်ချင်းဆီရဲ့ စိတ်တွေကို ယေဘုယျအကဲခတ်လို့ရနိုင်တဲ့ နေရာတစ်နေရာဖြစ်နေတာတော့ သေချာတယ် ညီမလေး။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ လက်ခံရာတွေ ရေးကြသားကြ၊ ဝေမျှကြတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ၊ အမူအကျင့်၊ အတွင်းစိတ်တွေကို အနည်းနဲ့အများ ထင်ဟပ်ကြတယ်။ ဟိုးအရင်က ခင်မင်နေသူတွေလည်း FB ပေါ်မှာ မိတ်ပျက်ကြ၊ အရင်မသိဘူး မမြင်ဘူးသူတွေလည်း FB သုံးရင်း ရင်းနှီးခင်မင်လာကြ။ FB ဆိုတာ မလိမ်မိုးမလိမ်မာ၊ မသုံးတတ် သုံးတတ်သူတွေအတွက် တချို့တွေရဲ့ အသုံးချရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ FB ဆိုတာ အသုံးမတော်ရင် ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းမယ့် နေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါရော ညီမလေးရေ။
ညီမလေးအနေနဲ့လည်း နည်းပညာတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ အင်တာနက်ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သုံးတတ်ဖို့ လိုတယ်။ လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်တွေ ရှာဖွေဖို့၊ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရဖို့၊ ပညာရေးအတွက် အသုံးပြုဖို့၊ ဘာသာစကား၊ အခွင့်အလမ်းစတာတွေအတွက် အသုံးပြုတတ်ဖို့ အင်တာနက်ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးတတ်ဖို့ လိုတယ်လို့ မမကြီးပြောတာပါ။
အင်တာနက်ဆိုတာ FB တစ်ခုတည်း သုံးတတ်ရုံပဲ မဟုတ်ဘူး။ Viber တစ်ခုတည်း သုံးတတ်ဖို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ တချို့ ရှိတယ်။ အင်တာနက်ဆိုရင် FB ရယ်၊ Viber ရယ်ပဲ သိတယ်တဲ့။ အီးမေးလ်တောင် မပို့တတ်ဘူးတဲ့။ အင်တာနက်သုံးတယ်ဆိုတာ ဒီထက်ကျယ်ပြန့်တဲ့ ပညာတွေ၊ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ နည်းပညာတွေ စတာတွေ အတွက်မဟုတ်ဘဲ အပေါ်ယံသက်သက်ဖြစ်တဲ့ မသိ၊ မမြင်ဘူးကြသူအချင်းချင်း အရည်မရအဖတ်မရတွေ ပြောနေရုံပဲဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင် အချိန်တွေ နှမြောဖို့ ကောင်းလိမ့်မလဲနော်။
ဂူဂဲလ်ကနေ ဘယ်လိုရှာရမယ်မှန်း မသိတဲ့ အင်တာနက်သုံးသူတွေထဲ ညီမလေး မပါစေချင်ဘူး။ ဘယ်မှာနေလဲ၊ နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ၊ နေကောင်းလား စတာတွေနဲ့လည်း မမကြီး ညီမလေးကို အချိန်မကုန်စေချင်ဘူး။ အချစ်ကဗျာလေးတွေဖတ်၊ အချစ်အကြောင်းလေးတွေ ရေးထားတဲ့ စာသားလေးတွေအပေါ်မှာလည်း ငါ့ညီမလေးကို အချိန်မကုန်စေချင်သေးဘူး။ ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် အမြင်ကျယ်ကျယ်ရှိဖို့၊ အမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့၊ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို သန်မာဖို့ စာများများဖတ်စေချင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ညီမလေးရေ… ဘယ်အရာမဆို အသုံးချခံ တစ်ယောက်မဖြစ်စေဘဲ၊ ဥာဏ်အမြော်အမြင်ရှိရှိနဲ့ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ မမကြီး ဆုတောင်းပါတယ်။
Posted by ယုန်ကလေး at 4:41 PM0comments
ယုန်ကလေးက ကိုကြီးရဲ့ ယုန်ကလေးဆိုရင်
ကိုကြီးက ယုန်ကလေးရဲ့ လမင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်..
လမင်းဆိုတာ ယုန်ကလေးဘယ်သွားသွား အနားမှာ လိုက်ပါနေတာ မဟုတ်လား...
ကိုကြီးက မေ့တတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ ယုန်ကလေးနဲ့ ပတ်သက်သမျှကိုသာ သတိရဆုံးလို့ ကိုကြီးက ဆိုရင်...
ယုန်ကလေးက ကိုကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင် အသေးစိတ်ကအစ သတိရနေတာက ယုန်ကလေးရဲ့ အားနည်းချက်ဖြစ်မယ်။
ကိုကြီးနဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ယုန်ကလေးရှိတယ်လို့ ကိုကြီးကဆိုရင်...
ယုန်ကလေးရဲ့ စိတ်၊ ခန္ဓာ အားလပ်ချိန်တိုင်း တွေးနေမိတာ ကိုကြီးအကြောင်းပါ။
စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ ယုန်ကလေးလို့ ကိုကြီးက ဆိုရင်..
ဒီကမ္ဘာမှာ ယုန်ကလေး တစ်ရက်ထက်ပိုပြီး စိတ်ဆိုးလို့ မရတာ ကိုကြီးတစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။
အငေါက်အငမ်းထူတဲ့ ကျောက်တန်းသူလို့ ကိုကြီးကဆိုရင်..
ဂရုဏာဒေါသောနဲ့ ပြောတဲ့ စေတနာအမှားတွေလို့ ယုန်ကလေးတော့ ချေပမှာပဲ။
၁၁၅ပေါင်ပြည့်အောင် စားပါလို့ ကိုကြီးက ဆိုရင်...
ကိုကြီးသာ ပေါင် ၁၅၀ဖြစ်အောင် ၀ိတ်ချပါလို့ ယုန်ကလေးတော့ ပြန်ပြောမိမှာပဲ။
နှုတ်စကားကြားမှ ယုံလိုသူကလေးလို့ ကိုကြီးက ဆိုရင်...
ရိုးမသွားနိုင်တဲ့ စကားတွေကို ကိုကြီးခဏခဏပြောပါလို့ တောင်းဆိုမိမှာပါပဲ။
အဲ့ဒီယောက်ျားလျာလေးအဖြစ်က လွတ်မြောက်သွားတာ ကိုကြီးကြောင့်ဖြစ်မယ်။
ချစ်သူသိစေ သီချင်းနားထောင်ပြီး ယုန်ကလေးကို သတိရတယ်လို့ ကိုကြီးက ဆိုရင်...
ကိုကြီးပေးထားဖူးတဲ့ သီချင်းတွေကို ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လမ်းသွားရင်း ကြားမိရင်တောင် သတိရစိတ်နဲ့ မျက်ရည်ဝဲမိတာ ယုန်ကလေးပါ။
ဒါပေမဲ့လည်းလေ ကျနော်တို့တွေက ၃နဲ့ ၄လို ဘ၀တွေပါ။
ဆုံနိုင်ခွင့်ဆိုတာကိုလည်း ကျနော် မမျှော်လင့်တော့ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်မှာ အရာရာကို ခွင့်လွှတ်သည်းခံပေးခဲ့တဲ့ ကိုကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။
Posted by ယုန်ကလေး at 5:15 PM0comments
ကျနော်က သူ့အတွက် ချစ်စရာအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတစ်ကောင်ပေါ့။
လေလိုင်းလေးက ကျနော်တို့ရဲ့ အလွမ်းဖြေရာ၊
ပြီးတော့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို
မျှဝေမိတဲ့ ကျနော့်တို့ရဲ့ အလွမ်းခြေရာ
သူက ကျနော့်ရဲ့ မီးအိမ်ရှင်
alarm ပေးထားရတဲ့ နှလုံးသားနဲ့လူ။
ကျနော်က အချစ်မဲ့လူသားကို ချစ်နေမိသူပါ။
ဒါ့ကြောင့် အမှတ်ရစရာတွေကို ကျနော် အမှတ်မရချင်ဘူး။
Posted by ယုန်ကလေး at 11:49 AM0comments
ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ ထင်မှတ်ထားသမျှအရာတွေထဲမှာ ဒီအရုပ်လေးလည်း ပါခဲ့ဖူးတယ်။ တကယ် မပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ၀မ်းနည်းစိတ်၊ နှမြောစိတ်နဲ့ စွန့်လွှတ်ရတဲ့အတွက် နာကျင်ရတဲ့ ခံစားမှုတွေကို ဘယ်သူနားလည်နိုင်မှာလဲ။ ကိုယ်မပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ အရုပ်လေးကို နှမြောတသစွာနဲ့ စွန့်လွှတ်လိုက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်က ကိုယ့်အတွက် အခက်ခဲ့ဆုံးပါ။ နှလုံးသားနဲ့ ဦးနှောက်ယှဉ်ပြိုင်ရင် ဘယ်သူနိုင်မယ်လို့ ထင်လဲဟင်။ ကိုယ်တော့….။
Posted by ယုန်ကလေး at 5:20 PM0comments
လွမ်းလို့ရယ် မကုန်နိုင်ပါ ဆရာ...
ဆရာ့ရဲ့ စာတွေဖတ်ဖူး၊ ဆရာ့ကို အပြင်ပွဲတွေဘာတွေမှာ တွေ့ဖူးပြီး ဆရာ့ကို လေးစားပေမဲ့ ဆရာ့ကို အပြင်မှာ မနှုတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ၂၀၁၂ခုနှစ် မေလဆန်းမှာတော့ ဆရာ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကနေ မောင်ဝံသသတင်းပညာသင်တန်း အပတ်စဉ် (၂)အတွက် သင်တန်းသားခေါ်ယူတော့ သင်တန်းတက်ဖို့အတွက် ဆရာ့မေးလ်ကို ပေးပို့လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဆရာ့ဆီက မေလ ၁၄ရက်နေ့မှာ သင်တန်းတက်ခွင့်ရကြောင်း မေးလ်ပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်။
<<<< maung wuntha <maungwuntha@gmail.com>
ဇွန် ၄ စမယ့်သင်တန်းအတွက် လက်ခံကြောင်း ပြန်ကြားပါတယ်။
လောလောဆယ် တက်နိုင်ရင် ပထမပတ်က Journalism English ဒီနေ့မှ စသင်တယ်။
နက်ဖြန် ၁၅-၅-၁၂ နံနက် ၈နာရီမှ ၁၀နာရီ လာတက်စေချင်ပါတယ်။ တော်တော်လေး အကျိုးရှိတဲ့ ပို့ချချက်ဖြစ်လို့ ဒုတိယပတ် ဖွင့်ချိန်ကို မစောင့်ဘဲ တက်စေချင်တယ်။
ဆရာ့ရဲ့ သတင်းစာပညာသင်တန်းကြောင့် သတင်းစာပညာကို တက်ရောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။ သတင်းစာပညာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်လည်း အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ သင်တန်းကာလ သုံးလမှာ အပတ်စဉ် တနင်္လာကနေ သောကြာအထိဖွင့်တဲ့ တစ်ပတ်ငါးရက်သင်တန်းဖြစ်တယ်။ သင်တန်းစတက်ဖို့ ဆရာ့ဆီ လျှောက်လွှာပို့ကတည်းက ဆရာက သင်တန်းကို (မဖြစ်မနေကိစ္စမျိုးကလွဲပြီး) မပျက်မကွက် တက်စေချင်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။
သင်တန်းစတက်ခွင့် ရတဲ့နေ့မှာ ကျနော်သင်တန်းကိုရောက်တော့ သင်တန်းသားနှစ်ယောက်လောက်ပဲ ရောက်သေးတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာ့သင်တန်းက သင်တန်းအတွင်းရေးမှူးအစ်မရယ် သုံးယောက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ နောက် သိပ်မကြာခင်ပဲ အင်္ကျီလက်ရှည်အဖြူရောင်နဲ့ ချည်လွယ်အိတ်အနီရောင်လေးလွယ်ပြီး ဆရာရောက်လာခဲ့တယ်။ ရောက်ရောက်ခြင်း ဆရာက အေးမြလန်းဆန်းတဲ့ အပြုံးနဲ့ သင်တန်းသားအသစ် ဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ကို လှမ်းနှုတ်ဆက်တယ်။
သင်တန်းမတက်ခင်တုန်းက အင်းစိန်မှာနေတာဆိုတော့ သင်တန်းချိန် မနက် ၈နာရီ ရောက်နိုင်ပါ့မလားလို့ ဆရာက မေးဖူးတယ်။ အခုတော့ အစောကြီးရောက်နေတော့ ဆရာအံ့သြနေပုံရတယ်။ ဆရာက သင်တန်းသားတစ်ယောက်ခြင်းဆီကို အမြဲတမ်းဂရုတစိုက်နဲ့ အလေးအနက်ထားတတ်တယ်။ သင်တန်းမှာ နေမကောင်းတဲ့သူရှိရင်ဆိုရင် ဆေးအတင်းတိုက်လေ့ရှိတယ်။
အလုပ်တွေအရမ်းများတဲ့ ဆရာက သင်တန်းကို အချိန်ပေးခဲ့တယ်။ နေ့စဉ် သင်တန်းသားတွေတောင် လူမစုံသေးဘူး ဆရာက သင်တန်းကို မနက်အစောကြီးရောက်တယ်။ မနက်စာ(မုန့်တစ်ခုခု)ကို သင်တန်းရောက်မှ စားနေတဲ့ ဆရာ့ကိုအမြဲလိုလိုတွေ့ရ တယ်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းရောက်လာတဲ့ သင်တန်းသားတွေကို ပြုံးပြီးကြည့်နေရင်း နှုတ်ဆက်စကားဆိုေ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ဒီနေ့ ဘာသတင်းတွေထူးလဲဆိုတာ မေးတယ်။ ပြီးရင် သင်တန်းသားတွေ မေးသမျှကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖြေပေးတတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ ဆရာရှင်းပြတာ နားလည်ရဲ့လား၊ တကယ်နားလည်တာလားဆိုပြီး ထပ်ကာထပ်ကာ မေးတတ်တယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်း ၁၉၆၂ကနေ ၁၉၈၈အထိပြောရင်း ထင်ရှားတဲ့ သူတွေအကြောင်း အရင်ဆုံး သင်တန်းသားတွေကို မေးခွန်းမေးလေ့ရှိ တယ်။ သူ့ကိုသိလား၊ ဘယ်လိုသိတာလဲ။ သူနဲ့ပတ်သက်သမျှ သိသလောက် နည်းနည်းပြောပြပါဆိုပြီး မေးလေ့ရှိတယ်။ အဲလိုမေးပြီးမှ ကျနော်တို့ သိမှတ်မှားနေတဲ့ ပြင်စရာအချက်တွေကို ဆရာက ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြလေ့ရှိတယ်။
မနက်တိုင်း သင်တန်းကို လူငယ်တစ်ယောက်လို ပေါ့ပါးဖျတ်လတ်စွာနဲ့ လန်းလန်းဆန်းဆန်းရောက်လာတတ်တဲ့ ဆရာ့ကိုကြည့်ရင်း အလုပ်တွေအများကြီးရှိတာတောင် ဆရာက လူငယ်တစ်ယောက်လို ဖျတ်လတ်နေလိုက်တာလို့ စိတ်ထဲတွေးရင်း အားကျမိတယ်။
သင်တန်းကာလမှာ ဆရာ သတင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်ပခရီးစဉ်တွေသွားတော့ ကျနော်နဲ့ ဂျီတော့ခ်မှာတွေ့ရင် သင်တန်းအခြေအနေ မျက်ခြေမပြတ်မေးမြန်းခဲ့တယ်။ ‘သင်တန်းသားအားလုံးကို ဆရာသတိရတယ်၊ အားလုံး ကျန်းမာပါစေ ဆုတောင်းတယ်’ လို့ အဝေးကနေ သင်တန်းသားတွေကို ကျနော့်ဆီကတဆင့် နှုတ်ဆက်စကား ဆိုလေ့ရှိတယ်။ ‘ဒီကနေ့ သင်တန်းမှာ လူစုံရဲ့လား…’ လို့ အဝေးကနေ သင်တန်းကိုစိတ်ပူနေတတ်တဲ့ ဆရာ။
ဆရာ့မှာ အဆုတ်ကင်ဆာလက္ခဏာတွေ့တယ်လို့ စသိတော့ သင်တန်းသားတွေအားလုံးကို ပြောပြခဲ့တယ်။ ဆရာ စင်ကာပူမှာဆေးသွားစစ်ရင်း ရောဂါကို အနိုင်တိုက်ရင်း လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်တွေ ဆက်လုပ်မယ်လို့ တပည့်တွေကိုပြောတယ်။ ဆရာ့ကိုကြည့်ရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်ကိုကြည့်ရင်း ဆရာ့ရောဂါက မသေချာသေးပါဘူး…. စင်ကာပူမှာ ဆေးစစ်ကြည့်မှ သေချာသိမှာပါလို့ ဆရာကပြန်ပြီး အားပေးရှာတယ်။ ဆရာရှေ့ရောက်တိုင်း ဆရာ့အတွက် စိတ်ပူနေ၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကို ဘာမှမဖြစ်သလို ထိန်းချုပ်နေမိတယ်။ ဆရာကတော့ တပည့်တွေအားလုံးကို အားပေးတဲ့အပြုံးနဲ့ ပြန်နှစ်သိမ့်နေသေးတယ်။
နောက်ပိုင်း စင်ကာပူမှာ ဆရာဆေးသွားစစ်တယ်။ ဟိုမှာ ဆေးကုနေရင်း လိုင်းပေါ်မှာ ဆရာနဲ့တွေ့ဖြစ်ရင် သင်တန်းအကြောင်းတွေ မေးတယ်။ ပြီးတော့ သင်တန်းသားတွေအားလုံးကို သတိရတဲ့အကြောင်း၊ ကျန်းမာပါစေလို့ မေတ္တာပို့ပေးနေတယ်လို့ မကျန်းမာတဲ့ ကြားက တပည့်တွေကို စိတ်ပူပြီး ဂရုတစိုက်နဲ့ ပြောရှာတယ်။
သင်တန်းကို အကြောင်းပြုပြီး ဆရာနဲ့သာမက ဆရာ့မိသားစုနဲ့ပါ ခင်မင်ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်စိုးကလောင်နာမည်နဲ့ ပြည်သူ့ခေတ်မှာ စာတွေရေးနေတဲ့ မလတ်ကို အပြင်မှာတွေ့တော့ ကိုယ့်အစ်မအရင်းလို ချစ်ခင်လေးစားခဲ့ရတယ်။ မလတ်ကို လူချင်းမသိခင်ကတည်းက မလတ်စာတွေ ဖတ်ပြီး နှစ်ခြိုက်သဘောကျခဲ့ရတာ။ အပြင်မှာတွေ့တော့ လွတ်လပ်စိုးနာမည်နဲ့ လိုက်အောင်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ အမြဲပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေတတ်တယ်။
အန်တီကတော့ ဆရာ့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ဖက်ပီသစွာ စိတ်သဘောထားကောင်းပြီး ချစ်ခင်စရာကောင်းတယ်။ အန်တီနဲ့ ဆရာ့ကိုကြည့်ရင်း သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကြင်ကြင်နာနာလေးလေးစားစား ဆက်ဆံပုံတွေကို လေးစားအားကျမိတယ်။
တစ်ရက် ဆရာကီမိုသွင်းဖို့ ရန်ကုန်အင်တာနေရှင်နယ်ဟိုတယ်အောက်ထပ်က MCOC ကို အန်တီနဲ့အတူ သင်တန်းအတွင်းရေးမှူးအစ်မ(မသဲ)ရယ်နဲ့ လိုက်သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဟိုရောက်တော့ ဆရာဆေးသွင်းနေတုန်း ဆရာမောင်မောင်လှိုင်ရဲ့ ကင်ဆာရောဂါအကြောင်းသိကောင်းစရာ စာအုပ်ကို ဖတ်ပြခဲ့တယ်။
အဲဒီမှာ ဆရာက စိတ်ဝင်တစားနဲ့ နားထောင်နေရင်း တစ်နေရာရောက်တော့ မုန်ညင်းခါးလို့ ဖတ်ပြရမယ့်အစား ကျနော်က မုန့်ဟင်းခါးလို့ မှားဖတ်မိပါလေရော။ အဲဒါကို ဖတ်ပြတဲ့သူ ကျနော်ကိုယ်တိုင်တောင် သတိမထားလိုက်မိဘူး။ ဆရာက မုန့်ဟင်းခါးက ကင်ဆာရောဂါနဲ့ တည့်တယ်ဟုတ်လား။ အိမ်မှာ ချက်ခိုင်းပြီး စားရမယ်ဆိုမှ မှားဖတ်မိမှန်းသိတယ်။ အဲတော့မှ… မုန့်ဟင်းခါးမဟုတ်ဘူး ဆရာ…မှားဖတ်မိတာ အမှန်က… မုန့်ညင်းခါး…. လို့ပြောပြီး ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။
အဲဒီတုန်းက အခန်းက အရမ်းအေးတာကြောင့် ဆရာ့အနွေးထည်အင်္ကျီနဲ့ အန်တီ့အနွေးအင်္ကျီကို ကျနော်နဲ့ သင်တန်းကအစ်မ (မသဲ)ကို ပေးဝတ်ထားခဲ့တယ်။ နောက်ရက်မှာ ကျနော်ကော အဲဒီအစ်မပါ ဖျားတော့ နောက်တစ်ခါ ရန်ကုန်မှာ ဆရာဆေးသွင်းဖို့အတွက်ဆို ကျနော်တို့ကို အန်တီက ဖျားမှာဆိုးလို့ဆိုပြီး မခေါ်တော့ပါဘူး။
နောက်ပိုင်း စင်ကာပူဆေးသွားကုပြီး ပြန်လာတဲ့ ဆရာ့ကိုသွားတွေ့ရင် ဆရာက အလုပ်တွေ အဆင်ပြေရဲ့လား… မိဘတွေကော နေကောင်းကြလား… စတာတွေမေးတတ်တယ်။
နောက်ပိုင်း ဆရာ ၀ိတိုရီယဆေးရုံတက်နေရတော့ ဆရာ့ဆီ နှစ်ကြိမ်ရောက်ဖြစ်တယ်။ ပထမတစ်ကြိမ်သွားတော့ ဆရာ့ကို အရင်မြင်နေကျထက် အများကြီး သိသိသာသာကျသွားတာကို မြင်ရတော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ စကားတစ်လုံးပြောဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲအားယူနေရတဲ့ ဆရာ့ကိုကြည့်ပြီး ရင်ထဲဆို့နစ်နေတယ်။
ကျနော်ရယ် မသဲရယ် ဆရာ့ကုတင်တစ်ဖက်ဆီထိုင်ရင်း ကျနော်က ဆရာ့ခြေထောက်လေးတွေကို နှိပ်ပေးနေမိတယ်။ သူနာပြုဆရာမလေးက ဆရာရဲ့ညာဘက်လက်ကို နှိပ်ပေးနေတယ်။ ခဏကြာတော့ ဆရာ့က မနှိပ်နဲ့တော့...ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း နှိပ်နေရာကနေ ရပ်လိုက်မိတယ်။ ကျော့ကေခိုင်...နှိပ်... လို့ဆရာပြောလိုက်တော့ ကျနော်နှိပ်ပေးတာ ဆရာသက်သာလို့ဖြစ်မယ်လို့ တွေးရင်း ဆရာအိပ်မပျော်ခင်အထိ နှိပ်ပေးနေမိတယ်။ တစ်ခါတရံ မှိန်းနေရင်း ပါးစပ်ကလေးဟ ဟ သွားတော့ အန်တီက ဦးစိုးသိမ်း.... ပါးစပ်ပိတ်ထားလေဆိုပြီး နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကို စေ့ပေးလိုက်တော့မှ အသာပြန်စေ့သွားတယ်။
ဆရာနဲ့ စသိတဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ် ကျနော့်ကို ကျော့ကေခိုင်လို့ ခေါ်တာပါပဲ။ သင်တန်းတက်နေတုန်း ဆရာအပါအ၀င် မလတ်တို့ အန်တီတို့က ကျနော့်ကို ကျော့...လို့ပဲ ခေါ်ကြတယ်။ အဲဒီတုန်းက မှတ်မှတ်ရရ ဆရာက ကျော့ကေခိုင်လို့ နာမည်အပြည့်အစုံကို နောက်ဆုံးခေါ်ခဲ့တယ်။
နောက်ထပ် တစ်ခါဝိတိုရိယကို ထပ်ရောက်တာက ၈လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်နေ့ကပါပဲ။ အဲဒီနေ့မတိုင်ခင် ဆေးရုံမှာ ညဘက်ဆရာ့အနားမှာစောင့်ပေးနေတဲ့ ဆရာ့တပည့်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုစိုးထွဋ်ကို ၈လေးလုံးနေ့ကျရင် ဆေးရုံနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ MCC ခမ်းမကို ၀ှီးချဲနဲ့ သွားမယ်ပြောနေတယ်လို့ အဲဒီအစ်ကိုပြောပြလို့ သိရတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီနေ့က ၈လေးလုံးပွဲကနေ ဆရာ့ဆီရောက်သွားကြတယ်။ အဲဒီမှာ ပထမလာတဲ့ အခြေအနေနဲ့တောင် မတူအောင်ကို ဆရာ့အခြေအနေက အားရစရာမကောင်းပါဘူး။ ဆရာ့သမီးကြီးမထိုက် ဖေဖေကြီး တပည့်တွေ လာတယ်...လို့ပြောတော့ ဆရာ မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပြီး ပြန်မှိန်းသွားတယ်။
ကိုစိုးထွဋ်က ဆရာ...ကျနော်တို့ ၈လေးလုံးပွဲကလာတာဆိုတော့ ဆရာ့နှုတ်က တစ်ခုခုကို ရွတ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ သေချာနားစိုက်ထောင်ကြည့်တော့မှ လူစည်လားလို့ မေးတာမှန်း သိရတယ်။ ကိုစိုးထွဋ်က လူစည်တယ်...ဆရာ။ ပန်းချီပြခန်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံပြခန်းတွေနဲ့ ABSDF အဖွဲ့က အမှတ်တရပြခန်းတွေပါရှိတယ်...လို့ပြေတော့ ဆရာ့မျက်နှာက ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးပြုံးနေတယ်။
ပြန်လာတော့ ဆရာစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာစိုးလို့ နှုတ်မဆက်ဘဲ ပြန်လာကြတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဆရာ့ကို နောက်ဆုံးတွေ့ခြင်းပဲဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။
သြဂုတ်လ ၁၁ရက်နေ့ မနက်ခြောက်နာရီခွဲလောက် ဆရာ့အနားမှာနေတဲ့ ကိုစိုးထွဋ်ဆီက ဖုန်းဝင်လာတယ်။ မနက်စောစောစီးစီး အရေးတကြီးကိစ္စကလွဲရင် ဆက်စရာအကြောင်း မရှိတာမို့ အဲဒီဖုန်းကို ကိုင်ရမှာကြောက်နေမိတယ်။ ကိုင်လိုက်တော့လည်း ညီမလေးရေ... ဆရာ မနက်ခြောက်နာရီ ၁၅က ဆုံးပြီနော်....တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ပထမဆုံးပြေးမြင်မိတာက အန်တီ့ကို။ ကိုစိုးထွဋ် ... အန်တီအဆင်ပြေရဲ့လားဟင်... အန်တီနေကောင်းလားလို့ မေးမိတယ်။ အဲဒီနေ့က ကျောက်တန်းပြန်ရောက်နေတဲ့နေ့မို့ ကျောက်တန်းကနေ ဆေးရုံကို အခုချက်ခြင်းလာခဲ့မယ်လို့ ပြန်ပြောမိတယ်။ နောက်တော့ ဆေးရုံကို သွားဖို့အချိန်မမီတော့ဘူး။ ဆရာ Body ကို အအေးတိုက်ကိုပို့နေပြီတဲ့။ ဘားလမ်းအိမ်ကိုပဲ လာခဲ့လိုက်တော့ဆိုတော့ ဘားလမ်းအိမ်ကို မနက် ၈နာရီနောက်ပိုင်းလောက်ရောက်တယ်။
အဲဒီမှာ ဆရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာ လက်မခံနိုင်သေးတဲ့ အန်တီ့ကိုကြည့်ရင်း ကိုယ်ပါမျက်ရည်မဆည်နိုင်အောင် စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲရတယ်။
ဆရာရေ.... သြဂုတ်လမှာ သေမင်းက အကောင်းကြိုက်လွန်းတယ်လို့ သူများတွေက ပြောကြတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဂျာနယ်စာမျက်နှာတွေမှာ သြဂုတ်လက ၀မ်းနည်းကြောင်းတွေ အထပ်ထပ်နဲ့ပါ ဆရာ။ သြဂုတ်တစ္ဆေက ပြည်သူအများရဲ့ မျက်ရည်တွေကို သောက်သုံးပြီး လူမုန်းများလို့ သူ့ရဲ့ သြဂုတ်က အဆုံးသတ်မလှခဲ့ပါဘူး ဆရာ။
ကျနော့်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် Close Friends List ထဲမှာ လူနှစ်ဦးရှိတဲ့အထဲမှာ တစ်ဦးက ဆရာပါ။ ဆရာရဲ့ ပြောချင်လွန်းလို့ကဏ္ဍကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာတင်တိုင်း ကျနော့်ကို သတိတရနဲ့ tag ပေးခဲ့တယ်။ ဆရာနဲ့တွေ့ရင် သမီးကို ဆရာ tag ပေးထားတဲ့ဆောင်းပါး ဖတ်ဖြစ်လားလို့ မေးတတ်ပါတယ်။
ခုတော့ ဆရာရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်လေးက active မဖြစ်တာကြာပေမဲ့ ကျနော့်ရဲ့ Close Friends List ထဲမှာ ဆရာရှိနေတုန်းပဲ။ ဒီထဲမှာမှမဟုတ်ဘူး ဆရာက ကျနော်တို့ရင်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ ဆရာအဖြစ် တစ်သက်လုံးတည်ရှိနေမှာပါ။
ကျနော်တို့ လွမ်းနေရဦးမှာပါ ဆရာ....
Posted by ယုန်ကလေး at 4:02 PM0comments
ဂျာနယ်/ နှစ်သက်မိသော စာများ (7)
မှတ်မှတ်ရရ ကျနော်ငယ်ငယ်က (1)
လူထုစိန်ဝင်း ဆောင်းပါးများ (3)
မွေးနေ့ အမှတ်တရ (5)
လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ... တခုခုပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်...
ဘယ်သူ့ကိုမှ မစောင့်တဲ့ နာရီလေး...
မြန်မာပြည်ကို ချစ်သောသူတယောက်။ မြန်မာပြည်အတွက် အမှန်တကယ် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံသူများကို လေးစားတန်ဖိုးထားသူ။
နေ့စဉ် သွားနေကျ နေရာများ...